Lalatiana Ravololomanana : “Tsy mety intsony ny hitondran-dRavalomanana ny firenena” -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana Ravololomanana : “Tsy mety intsony ny hitondran-dRavalomanana ny firenena”
Mibaribary. Hitam-poko, hitam-pirenena izao fa mpanakorotana, ary tsy tia filaminana ry Marc Ravalomanana sy ny antoko Tiako i Madagasikara, na ny Tim. Noho izay indrindra, nitondra ny heviny mahakasika ny fomba fitantanan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, Lalao Ravalomanana mivady, ny mpanolotsaina monisipaly iray, Lalatiana Ravololomanana.
Araka izany, nilaza ity filankevitry ny tanànan’Antananarivo Renivohitra iray ity fa “efa manana tanjona hitantana indray ny firenena ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, sy ny antoko Tim”. Novaliany avy hatrany ihany anefa izany fa “tsy mety intsony ny hitondran-dRavalomanana sy ny ekipany, indrindra fa ny antoko Tim, ny firenena”. Nambarany fa ny fitantanana eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) aza tsy vitan’izy ireo fa korontana lalandava, mainka fa ny firenena iray manontolo no hotantanina. “Mazava ny ahy, tsy manaiky intsony ny fitantanan-dRavalomanana sy ny antoko Tim ny firenena aho”, hoy i Lalatiana Ravololomanana.
Ankoatra izay, nanamafy ity mpanolotsaina monisipaly ity fa tsy mpanara-dalàna, ary efa zatra mpanitsakitsaka ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny mifehy ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana. Hany, hoy izy, ka izay hitsofohany rehetra mikorontana avokoa, ary lavitry ny filaminana.
Manjaka ny risoriso
Tetsy andaniny, nilaza i Lalatiana Ravololomanana fa tsy misy mazava sy mangarahara ny fitantanana ny tanànan’Antananarivo hatramin’ny nitantanan’ny Ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana. “Tsy mangarahara mihitsy ny fitantanana ara-bola eo anivon’ny CUA. Fihetsika tsy ara-drariny sy tsy araka ny tokony ho izy no hitantanana ny tanàna. Manjaka loatra ny risoriso eo anivon’ny CUA. Noho izany, manohitra tanteraka ny fomba fitantanana ny tenako. Maro an’isa ry zareo Tim eo anivon’ny CUA, ary mampihatra ny jadon’ny maro an’isa”, hoy hatrany ity mpanolotsaina ity.
Voalaza ihany koa fa tsy voahaja intsony ny lalàna lah.2014-020 fa voahitsakitsaka tanteraka. Anisan’izany, hoy izy, ny mikasika ny fandrafetana ny tetibolam-piasan’ny CUA, izay tsy mbola nodinihina mihitsy. Teo ihany koa ny fandrafetana ny tetibola mikasika ny fandaharan’asan’ny Ben’ny tanàna, izay mbola tsy nisy ihany koa. Ny tena goavana indrindra, dia ny tsy fanaovan’ny Ben’ny tanàna tatitra tamin’ireo mpanolotsain’ny tanàna, sns.
Nambaran’i Lalatiana Ravololomanana fa tapitra mikorontana avokoa ny eto amin’ny tanànan’Antananarivo noho ny jadona sy ny antsonjay ary ny fitiavan-kelin’ireo mpitantana ny tanàna. “Tsy misy izay tsy nikorontana teto nanomboka tany amin’ny mpivarotra, ny taxi, ny taksibe, ny mpiasan’ny CUA, sns, noho ny hafitsoky ny Ben’ny tanàna mivady sy ireo manodidina azy. Tsy an-dRavalomanana, ary tsy an’ny antoko Tim, na koa an’ny orinasa Tiko ny tanànan’Antananarivo Renivohitra fa an’ny Malagasy rehetra. Noho izany,amin’ny maha Renivohitr’i Madagasikara an’Antananarivo, dia tokony ho tanàna fitaratra”, hoy izy teny am-pamaranana.